आयो दशैं ! साट्ने होइन नयाँ नोट ? यस्तो छ चहलपहल (फोटो/भिडियो) - Medianp
आयो दशैं ! साट्ने होइन नयाँ नोट ? यस्तो छ चहलपहल (फोटो/भिडियो)
मिडिया एनपी २प्रकाशित मिति: बुधबार, भदौ २८, २०७४१४:१२0
काठमाडौं, २८ भदौ । यस वर्षको दशैंका लागि सर्वसाधारणका लागि आज (बुधबार) देखि नयाँ नोट सटही खुला भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले दशैलाई लक्षित गरेर सर्वसाधारणलाई प्रतिव्यक्ति बढीमा २७ हजार रुपैयाँका दरले नयाँ नोट साट्न थालेको हो । दशैलाई ४० अर्ब रुपैयाँ नयाँ नोट वितरण गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले थापाथलीका अतिरिक्त राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंकका गरी १६ शाखाबाट नयाँ नोट वितरण गर्ने निर्णय भएको नोट व्यवस्थापन विभागले जानकारी दिएको छ । सटही खुला भएपछि सर्वसाधरण नयाँ नोट साट्न तोकिएका स्थानमा पुग्न थालेका छन् ।
कहाँ कति साट्न पाइन्छ ?
राष्ट्र बैंकको सटही काउन्टरबाट ५, १०, २० ५० र १०० का नयाँ नोट बढीमा २७ हजार र वाणिज्य बैंक, कृषि विकास र नेपाल बैंकबाट बढीमा २० हजार रुपैयाँसम्म नयाँ नोट सटही हुने छ ।
सिंहदरबार प्लाजा भवन, टेकु, नयाँ बानेश्वर, सानोथिमी, विशाल बजार र नक्साल, नेपाल बैंकको न्युरोड, बालाजु, पाटन औद्योगिक क्षेत्र, कीर्तिपुर र भक्तपुर, कृषि विकास बैंकको गौशाला, कोटेश्वर, रामशाहपथ, रत्नपार्क र मंगलबजारबाट नयाँ नोट पाइने छ ।
राष्ट्र बैंकको थापथली काउन्टरबाट नयाँ नोट साट्न पाइने छ । सरकारी निकायलाई नोटको उपलब्धता हेरी भदौ २१ देखि ३० गतेसम्म सटही सुविधा उपलब्ध गराउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
फोटो/भिडियो: दिनेश बोहरा